Vorwira vatengi pamusika
You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Vorwira vatengi pamusika
NYAYA yekurwira makasitoma epamusika pakati pemadzimai maviri yakapedzisira yasvitswa kumatare emhosva. Tafadzwa Masomo akaudza dare reHarare Civil Court kuti Debra Musambidzi ari kumushungurudza pamusika pavanotengesera vose kuburikidza nekumutuka nekumutorera vatengi vake.
“Changamire, ndauya kuno ndichida kuti amai ava vamiswe kundituka pamusika pangu nekuti ivo vanotengesera pedyo neni saka vane tsika yekundituka zvinonyadzisira pasina zvandaita. Pakauya munhu achida kutenga pamusika pangu vanomudeedza pamusika pavo ini ndorega kutengerwa,” anodaro Masomo.
Anoenderera mberi achiti anoshaya chikonzero chekuti sei Musambidzi achiita zvakadaro. “Naamai ava takazivirana pamusika, handina kana hukama navo asi ndinoshamiswa nehunhu hwavanoita kwandiri. Dzimwe nguva vanotuka vanhu vanenge vachitenga pamusika pangu,” anodaro. Musambidzi anopikisana nemashoko aya achiti iye ndiye aitofanira kuuya kudare nenyaya yekushungurudza naMasomo.
“Amai ava handivatuke uye ndiri kutoshamisika vauya pano, ini ndini ndaitofanira kumhan’ara nekuti ivo ndivo vanotindishungurudza. Ehe, pamusika tinorwira vatengi nokuti mumwe anenge anyanya kutengerwa vamwe vasingatengerwi saka zvinobhowa vamwe tototanga kutukana.
“Handini ndega ndinozviita izvi, zvinoitika kunyangwe pese pane madzimai anotengesa ivo vanotombozviitawo izvi,” anodaro Musambidzi.
Mutongi Amanda Muridzo akapa Masomo gwaro rerunyararo.